महान् गल्फर टाइगर उड्सले प्रशंसा गरेका नेपाली चेली प्रतिमा शेर्पा को हुन् ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १५ बैशाख २०७५, शनिबार ०६:५३ |
काठमाडौं । प्रतिमा शेर्पा नेपालकी नम्बर १ महिला गल्फ खेलाडी हुन् । यो साता विश्वका सर्वकालिन महान गल्फ खेलाडी टाइगर उड्सलाई भेटेको समाचारले शेर्पा सामाजिक सञ्जालमा निकै छाइरहेकी छिन् ।
उड्सले प्रतिमासँगको फोटो ट्विटमा पोष्ट गरेपछि नेपालमा त्यो खबर भाइरल बनेको थियो। ट्विटमा उनले लेखेका थिए, ‘आजको दिन मेरो टिमका लागि निकै हौसलापूर्ण रह्यो। हामीले नेपालकी उत्कृष्ट गल्फर प्रतिमा शेर्पालाई भेट्यौं। हामी सबैले उनको कडा परिश्रम, मिहिनेत र लगावबाट धेरै कुरा सिक्यौं।’
विश्व चर्चित टेलिभिजन ईएसपीएनले निर्माण गरेको आफ्नो वृत्तचित्रको प्रिमियरका लागि शेर्पा अमेरिका पुगेकी हुन् । त्यही मौकामा उनले गत मंगलबार अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मेडलिस्ट गल्फ क्लबमा पूर्व विश्व नम्बर–१ गल्फर उड्ससँग प्रशिक्षण गर्ने अवसर पाएकी थिएन्।
अहिले उनी नेपालकी नम्बर १ नेपाली महिला गल्फर हुन्। उनी व्यावसायिक गल्फ ‘सूर्य नेपाल गल्फ टुर’को छनोट खेल्ने पहिलो महिला खेलाडी समेत हुन्। गतवर्ष उनले फाल्डो सिरिज नेपालको उपाधि जितेकी थिइन् सँगै उनी फाल्डो सिरिज ग्रान्ड एसिया फाइनलमा सहभागी समेत भइन्। उन उच्चकोटीको व्यवसायिक गल्फ प्रतियोगिता अन्तर्गत पर्छ।
प्रतिमाको लक्ष्य पनि टाइगर उड्सजस्तै बन्नेछ। तर, त्यसका लागि पर्याप्त मेहनत र अभ्यासको खाचों रहेको उनी अौल्याउछिन्।
Photo Source : GulfDigest
Previousयसरी बुनिन्छ ‘नेपाली ढाका’ कपडा !
Nextदुई वर्षभित्र काठमाडौंमा मोनोरेल निर्माण गरिसक्ने चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव
पोर्चुगल युरोकप फुटबलको अन्तिम १६ मा प्रवेश
९ असार २०७३, बिहीबार ०२:४५
६ पुष २०७१, आईतवार १२:४४